Visitor is reading NEPAL VISION- 2025
Visitor is reading Football aka.Soccer Fans"
Visitor from US is reading Why are people so dumb ?
Visitor is reading professor arrested
Visitor from US is reading Help Needed on Coding Nepal
Visitor from GB is reading Happy B'day Cerine
[VIEWED 175190 TIMES]
Posted on 08-15-08 1:30 PM Reply [Subscribe]
कल्ले हो हाम्रो कपाल छैन भनेर हल्ला मचाको हो?
कपाल छ कि छैन भनेर त भुत्लाउनेलाई थाहा हुन्छ तिमार्लाई थोडी थाहा हुन्छ र?
बौचा नि आएछन्त, त्यो मुकुन्डो फिर्ता गर्देउ कि राखिछोड्या छ बौचो?
त्यो मैले बनाको म:म खा' भे थाहा पाउथेउ, ठुल्दाइ र पर्बते लाई सोध ठुल्दाइ पछीको को हो भनेर?
अर्को साल त्यो बेल्ट मेरो हातमा हुन्छ अब, के सोच्या छ बाबै?
दीपीका के छ? तिमी पनि किन लहरे सँग सँगइ गायब भको यत्रो दिन? त्यस्तो निस्ठुरी नबनन साथी
Posted on 08-15-08 1:33 PM Reply [Subscribe]
ओ लहरे बाउचा? रुघा लाग्यो भन्दैमा चौतारीबाट भाग्न पाईन्छ? खुरुक्क डाक्टरको नोट देखाउ, नत्र सबै पदबाट बर्खास्त होलाउ। अनि मुकुन्डो लगाएर लोके अवतार धारण गरेको होइन भन्ने पनि प्रमाण पेश गर।
पर्बत्या माड्साब, कुन गाउँ पर्‍यो तिम्रो? नाम मात्र भन, फोटो खोजेर टाँसम्ला।
ठुल्दाइ चिलिम ब्रेकमा हो कि कसो? अघि एक बट्टा गेंरा चुरोस ल्याइदिएको थिएँ, बट्टै रित्त्याउन गएको हो कि कसो?
अरु सबैलाई अपरान्हको तारेमाम।
Posted on 08-15-08 1:35 PM Reply [Subscribe]
लहरे तिम्रो काम मा त ४ दिन नाएर काम थुप्री रा होला होला ल यो चौतारी को नि सब्बै काम ओभर डिउ छ् तिम्रो
१.) दिन को ५० को दर ले २०० पोस्ट , ४० गाना पोस्ट गीतान्जली मा
२). चौतारी को नयाँ सदस्या लोकेन्द्र लामिछने लाई भर्ना लिने,ओरिएन्टेसन दिने
३). बिना सुचना ४,४ दिन गायब भएको मा चौतारी मन्त्री परिषद लाई सबै कुरा राम्ररी खुलाएर चिट्ठे लेख्ने।
४) ४ दिन को सब्बै पोस्ट हरु पढेर, चार दिन नहुँदा सिर्शक मा एउटा छोटो कथा लेख्ने।
५) खोकी या हाछिँउ आए, साझा बाट लग आउट गरेर मात्रा गर्ने।
बाँकी थप्दै जाउँ सब्बै ले.....
कस्तो निहुँ खोज्छ यार म सँग यो केटी त
आफुले केही गरेको छैन, रिस त नाक को टुप्पो मै झुन्डेको छ
गाली गरी हाल्छ,
फेरी आजकाल आफुलाई गाली पनि मिठो लागेर आको छ, तेही भर चुप लागेको के म
नत्र के के भइसख्थ्यो भन्नु पर्दैन होला नि
अनी ठुल्दाइ ले के भनेको खुलस्त भनिदिनुपर्‍यो, केही बुझेन मैले
आफु बिरामी परेर कस्तो हैरान, यिनिहतु के के भन्छ बा
अहिले सम्म पनि औषोधी खानु परेको छ, अब एकछिन मा खाने
Posted on 08-15-08 1:37 PM Reply [Subscribe]
छैन नेत्रे आज, जमघट ।
मात्र थपघट छ।
अस्ती को विकेण्डमा थियो। अवतारी रिट्ठे, पर्बते अनि अन्तरे दाई संग म: म: खाको।
रिट्ठे ले कती खाए? उस्लाई होइन, उसको भूँडी लाई सोध्नु पर्छ।
अन्तरे दाई २ महिना जती मोन्टानामा मन्टिएर आउने भनेर साँढे २ महिनालाई पुग्ने गरी बजाए। रह्यो पर्बते मार्साब - सुरु सुरु मा त छिमेकी नै हो नि जहिले पनि म: म: खाएकै छु, धेरै खन्न भन्थे। तर थोरै पनि खाएनन, धेरै भन्न त मिल्दैन होला साढे ७ पिलेट।
Posted on 08-15-08 1:41 PM Reply [Subscribe]
काम गरे रे ल - के देख्नु पर्‍यो मैले
हाकिम म काम गर्ने मैले - कुरै मिलेन
एस्तो एस्तो भयो भने हेर बिस्टुराम, तिम्रो नाउमा सुचन निकाल्नु पर्ला जस्तो छ।
असक्षमा घोषणा हुने रहर जाग्यो कि क्या हो,
अनी चिप्ले, खोकी लाग्दइमा डाक्टर कहाँ जानु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन
दुई चार वटा औषोधी खाए पुग्छ
अनी रिट्ठे ले कुन चाँही मुकुन्डो को कुरा गर्या हो,
त्यो फोटो बाट रिट्ठे लाई म: म: पोको पार्न आउँदैन भन्ने चाँही बुझियो ल
चौतारी रस्रङ प्रधान
Posted on 08-15-08 1:44 PM Reply [Subscribe]
हैन यो लोकु उर्फ लहरे छान्बिन आयोग गठन गर्नै पर्ने भयो ! अघी ब्यान सम्म पटर पटर गरेको लोकु अहिले लहरे आए पछी गायब छ !
अब त सन्का मात्र होइन कि काँन्फार्म भईसक्यो ! लहरे ले बिग टाइम ढोका डे'र ल्यायो
Posted on 08-15-08 1:45 PM Reply [Subscribe]
उडायो सपना सबै ठुल्दाइले
सपना सबै ठुल्दाइले ......
जे पर्ला पर्ला, आँफै बनाउने पर्यास गर्छु। मिठो बने दङ पर्छु, नमिठो बने पनि भुँडी भर्छु। तारेमाम
Posted on 08-15-08 1:48 PM Reply [Subscribe]
>>>रिट्ठे ले कती खाए? उस्लाई होइन, उसको भूँडी लाई सोध्नु पर्छ। <<<
"जिसका कोइ नही उसका तो ठुल्दाइ है यारो" भन्न लाग्या थिए
माथि को देखे पछी त यस्तो भये म
>>> लहरे ले बिग टाइम ढोका डे'र ल्यायो<<<
Posted on 08-15-08 1:50 PM Reply [Subscribe]
रिट्ठे के गर्नु, बाबा मेरो हाकिम हुनु भएको भए घरजम नै चौतारीमा गरेर बस्थेँ। काम लठिबत्र पारेर गफ चुट्न पनि गाह्रो। फेरी एक ठाउँमा बसेर गर्न पनि नपाईने काम। कहिले कता जानु पर्ने कहिले कता अनी कसरी चिहाउनु चौतारी? कती धेरै बिडम्बना छ साथी। अर्को हप्ता पनि यस्तै छ। आउन पाउदिन होला।
लहरे कस्ले निहु खोज्यो? ढटुवा कहिको। सबैलाई ढाट्दै बस अनी कालु र बाघ जस्तो हुन्छ अनी खान्छौ। कसैले पत्यौदैन तिम्रो कुरा। अझ रिस नाक को टुप्पामै छ रे मलाई। त्यस्तो भएको भए कुरा गरिरहन्थे होलानी खुबै तिमी सँग। झन साथी भनेर भनिराछु उल्टो कराउछ।
मामा हा हा हा #५ मा चै हसाउनु भयो। हो लहरे मेरो त झन नजिक नआउ है साथी यो रुघ खोकी त म कहाँ फेरी आएपछी जानै मान्दैनन
हैन के भन्छ यो लहरे
त्यो पनि मलाई , बिर्खे माइला को सम्धी लाई।
Posted on 08-15-08 1:51 PM Reply [Subscribe]
अरु भन्दा नि त्यो कीमा मोल्ने बेलामा
ॐ नमह: ठुलाया:
भन गज्जब हुन्छ म:म !
Posted on 08-15-08 1:52 PM Reply [Subscribe]
के हो नेत्रे त भरे आउछु भन्छ त? शँका लाग्यो नि के हो ठुल्दाइ ?
Posted on 08-15-08 1:54 PM Reply [Subscribe]
Posted on 08-15-08 1:55 PM Reply [Subscribe]
कुरो ठीक हो रिट्ठे, लहरे बाउचाले हामीलाई शहिड गेत् भन्डा पनि ठुलो ढोका डिएर ल्यायो। अझ जो चोर उसैको ठुलो स्वर गरेर ल्याउँछ। लोकेको मकुन्डो ल्या होइन भन्ने पर्मान पेश गर्छौ कि निलम्बन गरेर ल्याउँ?
ठुल्दाइ ले अस्ती शनिबार त गर्नु गर्‍यो नि
बिहान बिहानै फोन गरेर म: म: खान आउ रे ल
रिस उठेर हैरान आफुलाई, कस्तो बिहानै देखी मुड खराब के मेरो
मुडै अफ नि,
फेरी साँझ फोन आयो, म: म: बनाइरा भनेर, त्यसपछी त सहनै सकेन
अज पित: त के भन्छ भनेको त पिठो मुस्न आउ रे,
मैले नि मुछेको मुछै हो भन्दिये लौ जा, खान नपाए पछी के गर्ने त,
अनी रिट्ठे लाई के गरिरा भनेर सोध्या त स्नाक्स खाइराले ले लोल कस्तो मुर्ख भन्देखिन
हाँस उठेर हैरान, म: म: लाई वेट नगरेर स्नाक्स खाइराले, म: म: कै बेइज्जत
फिट्टान थ्यो चार पाँच जना त - नाम भनिरहन परेन होला है
Posted on 08-15-08 1:57 PM Reply [Subscribe]
बिस्टे ले अस्ती जिम्बालको सुचना निकालेको बिर्स्यो कि क्याहो, घिक्रो ठ्याक पारेको सुचना निकालेर
जिम्बाल लाई त गरे भन्देखिन जिम्बाल को सम्धी को के हाल गर्छु होला सोच बिचा गरेर बोल है
Posted on 08-15-08 1:59 PM Reply [Subscribe]
कस्तो निहु खोजेको मलाई त, बसी नसक्नु बनायो मलाई
ल दिपिका मेरो सपोर्ट मा बोल त केही, साथी हौ भनेको होइन, एही मौका हो बोल ल
हो हो ठीक हो चिप्ले !
अब लहरे लहरे नै हो लोकु होइन भने दुवै जानाले एउटै मिनेटमा ५ ५ वटा पोस्ट गरेर देखाउनु पर्‍यो